Iyo Archena Spa | Kufamba Nhau
Mariela Carril | | Murcia, Kufarira
Tiri kuswedera pedyo nezhizha uye vazhinji vedu vanoronga zororo. Tinogona here kuenda kunze kwenyika kana gore rino tinofanirwa kugara munyika? Unopenda makomo kana gungwa gore rino? Ichave iri zororo refu here kana mazuva mashoma chete? Ko kana gore rino takaedza dzimwe matsime anopisa? Kana tikasarudza zvitubu zvinopisa, sarudzo yakanaka ndiyo Archena Spa.
Zvitubu zvinopisa Ivo vari padyo naAlicante naMurcia uye vanga vari vanozivikanwa kwazvo spa kuenda mune ino chikamu cheSpain kwenguva loooong. Ngatizivanei iyo Archena Spa nhasi.
2 Shanyira iyo Archena Spa
Iyo spa iri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweSpain, mudunhu reMurcia, padyo nerwizi Segura uye muNatural Park yeValle de Ricote. Izvi Makiromita makumi masere kubva kuAlicante uye makumi maviri nemana chete kubva kuMurcia saka unogona kuenda uye kupedza mazuva mashoma mumvura inopisa, uchizorora.
Iyi spa yakatanga kumashure munhoroondo nekuti matsime anopisa ndeekare. Zvinotaridza kuti kushandiswa kwemvura inopisa nevagari kwakatanga kutenderera nezana ramakore rechishanu BC, mumaoko evaIberia, uyezve nzvimbo yacho ikava chikamu chemugwagwa wekutengesa wakaenda kuguta guru reTurdetania, Cástulo. Zviripachena ku vaRoma Vakaida uye ivo vane basa rekuvaka kwekutanga mabhati pachavo.
Izvi zvinoreva kuti, nezvivakwa zvakatsaurirwa kunakidzwa uye dzimba dzekugezera. Nekudaro, vanochera matongo emazuva ano vakawana zvisaririra zvemakoramu, chafarizamu gallery, hotera ine nhurikidzwa mbiri, dhipoziti yemvura yekunwa iyo yakashanda kuigovera gare gare, nemusuwo wayo uchiri kushanda, zvisaririra zvemavhiri emvura uye kunyange necropolis.
Iyo spa ichiri kushanda uye muMiddle Ages yaive mumaoko eOrder yaSaint John weJerusarema. Kubva muzana ramakore rechiXNUMX yakatanga kuwana mukurumbira, ipapo nzira dzinovandudzwa uye muzana ramakore regumi nemapfumbamwe ndeyekuti inotora yazvino dhorobha fomu, zvakajairika zvema spas enguva iyoyo, aine akati wandei mahotera: iyo Hotera termas, iyo Hotel Madrid uye iyo Hotel Levante, kasino ...
Shanyira iyo Archena Spa
Zvitubu zvinopisa zvakafanana nemvura inopisa. Pano mvura sarufa, sarufa, yakaderedzwa klorini, sodium, calcium, uye inobuda panopisa 52, 50 C yechitubu chikuru. Mvura pano yakasarudzika yeayo zvicherwa zvivakwa yakawanikwa mushure memakore zviuru gumi nezvishanu pasi pevhu.
Mvura inopisa iyi inorerutsa muviri, iwo akakura kubvisa kusagadzikana uye zororo, mukuwedzera pakurapa mamwe marwadzo akabatana kana kupfava ganda. Izvo zvakanaka kune rheumatism, mamiriro emapapu uye kurwadziwa kwepfupa zvakare. Zviripachena kuti hatigone kudhira mumvura dzinopfuura 50ºC tisina kuzvipisa isu, saka tembiricha yepakati iri 17ºC. Kana iwe ukawedzera kune izvi kuti inzvimbo yakanaka ine zuva uye anenge zviuru zvitatu zvemaawa ePhoebus mudenga pagore… zvakanaka izvo zvakanaka!
Archena yakaoma saka chinhu chakanakisa kuuya kuzogara muhotera yemukati. Pane matatu aunosarudza kubva pamazana makumi maviri nemashanu emakamuri. Iyo Nguva Yemahotera and the Hotel Levante nyeredzi ina, nepo iyo Hotel Leon Iyo nyeredzi nhatu ratidziro.
Iyo Termas Hotera iri kubva muzana ramakore rechi68 uye ine neo-Nasrid yekushongedza ine mufananidzo weTsime reShumba dzeAlhambra dzakabatanidzwa. Iyo inopa yemahara WiFi mumalounges uye yemahara yekuwana kune inopisa yakaoma. Iine makamuri makumi matanhatu neshanu ane yakakwana yekugezera, TV ine masisitimu epasi rose uye mini bar. Iinewo imba yekudyira. Iyo Hotera Levante yakafanana.
Ihotera León zvakare ine mukana wakanangana neiyo spa, ndiko kuti, haufanire kubuda muhotera uende kuzvitubu zvinopisa. Iine makamuri zana nemakumi manomwe nenomwe ayo akagadziridzwa nguva pfupi yadarika, pahuriri hutatu. Tarisa mukati ma117 masikati uye tarisa uri pa3, sekune dzimwe dzimba mbiri.
Iyo yakaoma inoumbwa nemadziva ekupisa, iyo yekudziya wedunhu uye zvakare ekushisa ekurapa ayo anopiwa. Kune madziva makuru maviri, rimwe rekunze uye rimwe remukati. Mukati mako mune mahydro-thermal masevhisi ane majeti emvura, hova, mapopoma, jacuzizi nedziva revana. Kune zvakare nzvimbo yemahombekombe, yekuchinja makamuri, snack bar. Iyo Thermal Garari ndiyo musimboti wenzvimbo nekuti kune chitubu uye Thermal Hotera ndiko kune iyo kurapwa.
Aya marapirwo anorayirwa navanachiremba mune hydrology (ruzivo rwekurapa matsime anopisa). Nekudaro, mune yekurapa menyu isu tinowana whirlpools, circular shawa, thermal jets, mweya wekufema, wet stoves, matope kurapwa, kwakasiyana masaja uye physiotherapy kurovedza.
Kune imwe massage inonzi Archena massage inoitwa pasi pemvura inopisa uye nedhaka, semuenzaniso, kugadzirisa kudzoka kwekupararira uye kusunungura zvibvumirano. Iyo madhaka ivhu rakasanganiswa nemvura yemaminerari patembiricha ye45ºC. Inoiswa pazvibatanidzwa, ine anti-kupisa uye analgesic chiito.
Kune rimwe divi kune chikamu chakabhabhatidzwa se Termachena inova diki inopisa yekushisa inoumbwa nechitofu chine hunyoro, 37 poolC dziva, yekupisa inopesana nemvura, chando uye makabati emipfupi yekumanikidza. Mhedzisiro yacho? Unotaridzika kukamhina sedhongi.
Mushure mekushanya kwako kuArchena Spa iwe unogona kutora pamwe newe zvigadzirwa zvakasiyana sezviyeuchidzo: gels yekugezesa, mamisi emuviri, akakosha mashampoos, anodziya mvura, anochenesa mamil, anodzivirira kukwegura mafuta anodzika masero, caviar serum, kumeso kumeso uye kirimu ruoko.
Ruzivo runoshanda nezve Balneario de Archena:
Maawa: Muvhuro kusvika Svondo kubva 10am kusvika 9 pm (Ndira kusvika Kurume 15, Mbudzi naZvita); kubva 10 am kusvika 10 pm (kubva Kurume 16, Kubvumbi, Chivabvu, Chikumi, Gunyana naGumiguru); kubva 10am kusvika 12 pm (Chikunguru na Nyamavhuvhu) uye musi waZvita 24 na31 kubva 10am kusvika 7 pm.
Mitengo: pane mamwe mazuva mutengo uri gumi nemana euros pamunhu mukuru uye makumi maviri nemaviri pazororo. Mamwe mazuva anodhura gumi nemaviri euros kubva Muvhuro kusvika Chishanu uye pakupera kwesvondo euros uye mamwe mazuva, 14 uye 22 euros zvichiteerana. Tarisa webhusaiti kune aya mazuva. Mutengo weiyo Thermal Circuit ndeye 12 euros mukati mevhiki uye makumi matatu neMugovera neSvondo. 18 euros kune avo vanogara pa spa.
Kune mapakeji ane pekugara uye asina pekugara. kubva kuma48 euros iwe unogona kunakidzwa nezuva neakaroora masaja uye kuwana kune inopisa wedunhu. Nekugara kune mapakeji emazuva matatu ekugara aine chirongwa chekudya uye marapirwo akasiyana siyana kubva ku144 euros pamunhu. Iwe unofarira 15% kuderedzwa kana iwe ukatenga mwedzi pamberi. Chinhu chakachipa chinobva kuma94 euros kwehusiku huviri hunosanganisira nzira dzemabhasikoro. Uye kunyange zvakapusa, kubva ku100 euros iwe une husiku huna, chikafu chakabatanidzwa uye kuwana kwemahara kumadziva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Spain maguta » Murcia » Iyo Archena Spa
Arribes del Duero yakasikwa paki